Woman Journey2| May Doe Kabar
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါရှင် ဒီတစ်ပတ်တော့ မေတို့ကမ္ဘာမှနေပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း လေးတစ်ခုဖော်ပြပေးလိုပါတယ်ရှင့်ကျွန်မတို့ မေတို့ကမ္ဘာ နုိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျေးလက်အမျိုးသမီးများကွန်ရက် နှင့်လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရန် National Climate Inclusion Researchers – Indigenous Women’s Voice & Climate နေရာအတွက် အလုပ်လျှောက်လိုပါက maydoekabar@gmail.com ကို အီးမေးလ်လေးပို့ပြီးလျှောက်နုိုင်ပါတယ် လုပ်ဆောင်ရမယ့်တာဝန်အသေးစိတ်ကိုတော့ အောက်ဖော်ပြပါ Link မှနေလည်းအသေးစိတ်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်....နောက်ဆုံးလျှောက်ရမယ့်ရက်ကတော့ 31.July.2019 ဖြစ်ပါတယ်ရှင်..ကျွန်မတို့ မေတို့ကမ္ဘာ Facebook Page တွင်လည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနုိုင်ပါတယ်ရှင်
ဒီနေ့တော့ကျွန်မတို့ရဲ့ မေတို့ကမ္ဘာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်လှစန်းထွေးကတော့ သူမတို့ရဲ့ ခြံမြေလေးထဲမှာ စိုက်ထားတဲ့ မြေမဲ့စိုက်ခင်းလေး အကြောင်းကို အသေးစိတ်ပြောပြပေးထာပါတယ်နော်.... ကဲမြေမဲ့စိုက်ခင်းဆိုတော့ ဘယ်လိုလေးစိုက်ထားလဲ ခုပဲဖတ်ကြည့်ရအောင်လေ....ရေသန့်ဗူးခွံဖြင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးခြင်းနည်းပညာကို မကွေးတိုင်း Terres des Hommes NGO အဖွဲ့မှလေ့လာရရှိခဲ့ပါ တယ်။ မေတို့အားမာန်အဖွဲ့သည် Scaling Up Nutrition Civil Society Alliance (SUN CSA) အဖွဲ့၏ exchange visit ဖြင့်လေ့လာမှုအတွက်ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှုဖြင့် သွား ရောက်လေ့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ မေတို့ကမ္ဘာ နဲ့ Cuso International တုိ့ ပူးပေါင်းတင်ဆက်ထားတဲ့ ပေါ်ပြူလာဖေဖေ/My Myanmar Dad ဇာတ်လမ်းတိုလေးတွေထဲကနေ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာအတွင်း (LIKE) လိုက်အများဆုံး ရရှိသောမိသားစုများကို ဆုရတဲ့မိသားစုတွေအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်.....
မတ်လ ၂၀ရက် နေ့ က ကျိုက်ထုိုမြို့နယ် မမှိုချာင်ကျေးရွာတွင် အ ပြောင်းအလဲကိုဖော်ဆောင်လိုသူများ ပြဇာတ် နှင့် 
အတူ ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားလေးကို ဌာနေတိုင်းရင်းသားများရဲ့ ပူပေါင်းပါဝင်တင်ဆက်သော ဖျော်ဖြေရေးအစီစဉ်များဖြင့် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
Artist, Designer, Historian
No matter what others around you think, to my mind’s eye you are beautiful, but know that beauty of the soul is the most lasting kind of.....
Daw Thein Aye
May Doe Kabar Board Member
Myanmar Women in States and Regions are Getting Closer thanks to May Doe Kabar Network
I am the Chairperson of Sein Lae Ayeyar Women Self-Reliant Group....
Daw Nu Nu Yi
I Am Very Proud To Be Part Of May Doe Kabar National Network Of Rural Myanmar Women
I am Daw Nu Nu Yee, Chairwoman of May Ar Mun Women Township....
Daw Myint Myint Aye
May Doe Kabar Member
I Invite All Of You To Connect With Our May Doe Kabar Network
I am the Chairperson of Sein Lae Ayeyar Women Self-Reliant Group... .
Wai Wai Kyaw
From The Mountains Of Shan State To Trip Advisor Star!
Explorer and International Speaker
Have The Courage To Follow Your Own Path In Life
Dear wonderful women of Myanmar I am writing this letter to you, as I believe all women have the ability to ..
I Badly Wanted To Be A Tiger Traniner
I am so happy that I haveachance to speak with you. Beingawoman isagreat gift andaterrific opportunity to dream and fulfill your dreams, to....
Member of Parliament, United Kingdom
Dear women of Myanmar,Thanks for letting me have the chance to speak to you and be part of the new democracy in your country. I’ve just spentaweek...
Daw Nyo Nyo San
I am Nyo Nyo San from Inn Sein May in Naung Cho Village, North Shan State. I am very happy and proud to write on behalf of our Women Self-Reliant Group members.I am the Chair ......
Actress, Artist and Lecturer
Look After Yourself – Love Yourself – If You Do Not Love Yourself How Can You Love Other People?
My dear Sisters: The most important thing I have to say to is know what..
တခြားသူများအား ကူညီပေးနိုင်သောကြောင့် ရရှိလာသော ပီတိအား ငွေဖြင့် ၀ယ်၍မရနိုင်ပါ
ကျွန်မသည် မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက်ထိုမြို့နယ်၊ စုစည်းအားမာန်မြို့နယ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ဥက္ကဌ ဒေါ်ချိုအေး ဖြစ်ပါသည်။ အသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်သော...
Daw Khaing Khaing Maw
As Long As I Do My Best, I Will Be Sparkling Like A Star
It is said that life is too short. In my opinion, everybody is struggling in their life Every human begin is...
Founder and Director of Akhaya Women
Let’s Honestly Help Each Other
I used to be an ordinary woman. I used to be shy and haveasense of inferiority until I came to know the truth. But on one winter day, I got...
Founder Fashion Revolution
Learning Confidence Is A Journey
Becomingafashion designer, and then becoming the founder ofaglobal movement forabetter fashion industry, were both something of...
many more stories available on iWomen app
Nobel Peace Laureate EDITED
One Thing I Could Make Happen it Would Be
I have the warmest of feelings for you the lovely rural women of Myanmar. I know that your hopes and dreams...
May Doe Kabar
61,4B, Pan Chan Street, Sanchaung Township, Yangon
Phone: (959) 786 860 577
Facebook: May Doe Kabar